ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်: World Assembly for Women (WAW!)2016” ညီလာခံမှ ဒေါ်စု၏ ဗွီဒီယို မိန့်ခွန်း
World Assembly for Women (WAW!)2016” ညီလာခံမှ ဒေါ်စု၏ ဗွီဒီယို မိန့်ခွန်း
World Assembly for Women (WAW!)2016” ညီလာခံသို့ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ၊ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး မှ ဗွီဒီယို မိန့်ခွန်းပေးပို့
ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ၀န်ကြီးချုပ် မစ္စတာ ရှင်ဇို အာဘေးမှ ကြီးမှူး၍ တိုကျြိုမို့တွင် ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ရက်နေ့မှ ၁၄-၁၂-၂၀၁၆ရက်နေ့ အထိ ကျင်းပလျက် ရှိသည့် “World Assembly for Women(WAW!) 2016”ညီလာခံ သို့ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ၊ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်မှ ဗွီဒီယို မိန့်ခွန်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါညီလာခံအား ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် အမျိုးသမီး များ၏ ပါဝင်မှု အခန်း ကဏ္ဍမြှင့်တင်ရေး ကြိုးပမ်းမှု တစ်ရပ်အနေဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေးမှ ဦးဆောင်ကြီးမှူး၍ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါ သည်။
အဆိုပါဗွီဒီယိုမိန့်ခွန်းတွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ၁၉၉၅ခုနှစ်တွင် အမျိုးသမီးများကဏ္ဍအတွက် အရေးပါသည့် Beijing Platform for Action အားချမှတ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများကဏ္ဍမှာ သိသိသာသာ တိုးတက်လာသည်ကိုတွေ့မြင်နေရကြောင်း နှင့် ပညာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်ကဏ္ဍများတွင် ရရှိနေသည့်တိုးတက်မှုများအား အလေးထားပြောကြားခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က တိုးတက်မှုများ ရရှိနေသော်လည်း ယနေ့အထိ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အမျိုးသမီးများအား ခွဲခြားဆက်ဆံသည့် အလေ့အထ ၊ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံရမှု၊ အလုပ်ချိန်ပိုမို လုပ်ကိုင်ရမှု ၊ ၀င်ငွေမရသည့် အိမ်ထောင်မှု အလုပ်များကို ထမ်းဆောင်နေသော်လည်း ၎င်းတို့၏လုပ်အားကို အသိအမှတ်ပြုမခံရမှု ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အဆင့်များတွင် အမျိုးသမီးများကိုယ်စားပြုမှု နည်းပါးနေမှုနှင့် စီးပွားရေး အရင်းအမြစ် များအား ညီမျှစွာ ရယူသုံးစွဲနိုင်နိုင်ခြင်းမရှိမှုစသည့် စိန်ခေါ်မှုများရှိ နေသေးကြောင်းကို မီးမောင်းထိုးပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါညီလာခံသို့တက်ရောက်လာသူများအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများ ကဏ္ဍမြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရာတွင် သမာရိုးကျအတွေး အခေါ်များမှ ခွဲထွက်ပြီး ဆန်းသစ်သောနည်းလမ်းကောင်းများ ရှာဖွေရန်လိုအပ်ကြောင်းဖြင့်လည်း အားပေး တိုက်တွန်းထားပါသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်သည့် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၌ ၀န်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေးက လူမှုအသိုက် အ၀န်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်မှုမြှင့်တင်ရန် ‘a society where women shine” ဟူသော အတွေးအခေါ်ကို မိတ်ဆက်တင်ပြခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရမှဦးစီးကာ WAW ညီလာခံကို နှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ် လျက်ရှိပါသည်။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဗီဒီယိုမိန့်ခွန်းအား မှတ်တမ်း တင်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
From : Ministry of Foreign Affairs Myanmar
Originally published at - https://www.facebook.com/mofamyanmar/videos/612495792284053/
ကဏ္ဍ ရုပ်/သံ, မိန့်ခွန်း, မြန်မာရေးရာ